सेक्स सम्बन्धी केही चर्चित विश्व किर्तिमान, तोड्ने हिम्मत छ ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन → सेक्स सम्बन्धी केही चर्चित विश्व किर्तिमान, तोड्ने हिम्मत छ ?
सेक्स सम्बन्धी केही चर्चित विश्व किर्तिमान, तोड्ने हिम्मत छ ?
October 23, 2015५०६ पटक
दुनियामा विभिन्न कामकुरामा मानिसहरुले किर्तिमान राखिरहेका हुन्छन् । कतिपयले सकारात्मक कामका लागि किर्तिमान राख्छन् तर कतिले उरन्ठेउला काम गरेरै भएपनि गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछन् । दुनियाकै सबैभन्दा बिकाउ विषय मानिएको सेक्सका विषयमा किर्तिमान राख्न नचाहनेे मानिस कमै होलान् तर हिम्मत र क्षमता सबैमा हुने कुरा भएन । तर सबैले किर्तिमानै राख्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ र ? पढेरै आनन्द लिँदापनि त हुन्छ । ल आउनुहोस् जानिराखौँ यौन सम्बन्धी केही रोचक विश्वकिर्तिमानहरु :
विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली वियस्खलन गर्ने व्यक्तिको नाम हो हस्र्ट स्चल्ज । उनले विर्य स्खलन गरेर ६ मिटर टाढा, १२ फिट ४ इन्च माथि ४२.७ माइल प्रतिघण्टाको गतिमा स्खलन गर्दै विश्वकिर्तिमान कायम गरेका छन् ।
मानिसलाई एक घण्टामा सबैभन्दा धेरै कतिपटक सम्म उत्तेजना तथा चरम आनन्द प्राप्त हुन सक्ला ? अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित म्यारिटल एण्ड सेक्सुअल स्टडिज सेन्टरका शोधकर्ताले गरेको अध्ययन अनुसार उनीहरुले महिलाले एक घण्टामा १३४ पटक तथा पुरुषले १६ पटक सम्म चरम आनन्द अर्थात् अर्गाज्म प्राप्त गर्न सक्छन्, जुन अहिलेसम्मकै बढि हो । साथै एक अर्को अध्ययन अनुसार महिलामा हुने चरम आनन्दको सबैभन्दा लामो समय ४३ सेकेण्ड हो ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै विर्य निलेको किर्तिमान अमेरिकाकी मिचेल मोनाहानको नाममा छ । उनले सन् १९९१ को जुलाइमा लस एन्जल्समा आफ्नो पेटभित्रबाट आफुले पहिले निलेको १.७ पिन्ट विर्य वान्ता गरेर विश्वरेकर्ड कायम गरेकी हुन् ।
विश्वमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो गुप्तांगको रौँको लम्बाइ कति छ ? दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनकी माओनी भी विश्वमा सबैभन्दा लामो गुप्तांग रौँ भएकी महिला हुन् । उनको गुप्तांगको रौँको लम्बाइ २८ इन्च थियो भने काखीको रौँको लम्बाइ ३२ इन्च ।
विश्वमा सबैभन्दा बलियो योनी भएकी महिला रुसकी तातिएता कोझेव्निकोभा हुन् । ४२ वर्षकी तातिएताल आफ्नो योनीको सहायताले ३१ पाउण्ड तौल उठाएर किर्तिमान कायम गरेकी हुन् ।
एक दिनमा सबैभन्दा धेरै पुरुषसँग सम्भोग गर्ने महिला अमेरिकाकी लिजा स्पार हुन् । चर्चित पोर्नस्टार लिजाले सन् २००४ मा एकैदिन ९१९ जना पुरुषसँग सम्भोग गरेकी थिइन् ।
विश्वमा सबैभन्दा लामो हस्तमैथुन गर्ने व्यक्तिको नाम मासानोबु सातो हो । सन् २००९ मा अमेरिकामा भएको हस्तमैथुन म्याराथनमा उनले ९ घण्टा ५८ मिनेटसम्म लगातार हस्मैथुन गरेका थिए ।
विश्वमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो लिंगको लम्बाइ ३४ सेन्टिमिटर छ । जोन फाल्कोन नामका व्यक्तिले सबैभन्दा लामो लिंगमा किर्तिमान कायम राखेका छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा ठूलो योनीको किर्तिमान चाहीँ अन्ना स्वानको नाममा छ । उनको योनीको परिधी १९ इन्च थियो ।
विश्वमा सबैभन्दा बलियो लिंग भएका व्यक्ति हुन् हंगकंगका मो का वांग । उनले सन् १९९५ मा आफ्नो लिंगले अढाइ सय पाउण्ड वजन उठाइदिएका थिए ।